Nkọwa ndị ahụ nke na - ewepụ gị na ndụ dị mma | Bezzia
Susana Garcia | 04/05/2021 20:00 | Udo, Ahụike
Oge ụfọdụ obere ihe na - enwe nnukwu nsonazụ ma na - egosi na nke a bụ na ịgwakọta obere mmegharị ahụ kwa ụbọchị nwere ike iduga na ndụ abụghị ụdị ndụ anyị chọrọ ibi. Obere nkọwa nke ndụ ụbọchị na-agbanahụ anyị mana nwere ike ikpebi mgbe ọ na-eduga ibi ndụ kpebisie ike ma ọ bụ gbanwee ya kpamkpam. Ọ dị mkpa iji mesie ike ọ bụghị naanị mmegharị ahụ nnukwu kamakwa nke ndị pere mpe.
Un Obere nkọwa kwa ụbọchị na-abụ ihe na-emetụta anyị ọtụtụ n'ime. Nke a na-aga maka ihe niile ma bụrụkwa ezigbo ihe n'ihi na obere mgbanwe anyị nwere ike mezuo nnukwu ebumnuche. Ya mere, ka anyị chọpụta ihe obere nkọwa ndị ahụ taa anaghị ekwe ka ị bie ndụ dị mma.
1 Don't chọghị nri gị
2 I kwere ka onwe gi otutu ihe
3 Only na-elekwasị anya naanị n'ịtụfu
4 Na-eme egwuregwu na-adịghị amasị gị
5 Kwe ka onwe gị chee mgbanwe ahụ
Don't chọghị nri gị
Nke a nwere ike ịdị ka ihe dị egwu mana ọ bụrụ na anyị edoghị nri anyị, ọ ga-adịrị anyị mfe ịdaba n'ọnwụnwa nke iri ihe adịghị mma nke arụchara ọrụ nke ukwuu ma ọ bụ nwee abụba na shuga. Ọ bụ ya mere atụmatụ dị mma nwere ike iji nyere gị aka nke ukwuu ma a bịa n’ibido ndụ siri ike. Anyị nwere ike ịnabata onwe anyị mana ha ga-emerịrị ihe n’oge, naanị ụbọchị pụrụ iche. Oge fọdụrụ anyị ga-arapara n'otu nri nke kwesịrị ekwesị ma dị mma izere ịgbakwunye nri ma ọ bụ ihe ndị nwere ike ime ka nri anyị kwụsị ịdị mma.
I kwere ka onwe gi otutu ihe
Ọ bụ eziokwu na anyị na-enwe ụbọchị ụfọdụ mgbe ihe ụtọ na-agụ anyị ma ọ bụ na-esiri anyị ike ị eatụ ma ọ bụ ị drinkụ mmanya na-aba n’anya n’oge oriri. Mana ụdị ihe ndị a bụ ihe na - eme anyị ka anyị mechara nwee ike ibikwa ụdị ndụ dị mma dịka anyị chọrọ n’amaghị ama, n’ihi anyị na-ebu anyị ndị a obere ohere. Yabụ na ọ dị mkpa ịmara mgbe niile maka ụbọchị anyị nwere ike ị nweta ihe, na-ebuteghị oke. Ọbụghị naanị ahụike na ahịrị anyị ga-ekele anyị, kamakwa afọ ọma anyị. Ga-achọpụta etu mgbaze ndị ahụ anaghị adị arọ karị na otu ị na-adị mma karịa.
Only na-elekwasị anya naanị n'ịtụfu
Nke a abụghị ihe ngwọta maka ndụ dị mma, ebe ọ bụ na e nwere ndị nwere ike ịdịtụ arọ ma ka nwee ahụ ike na ndị ọzọ dị gịrịgịrị. Ya mere chee na ọ bụghị maka ifelata ka ọ dịkwuo mma, ọ bụ maka ilekọta ahụ gị ka ọ dịkwuo mma. Mgbe anyị lebara onwe anyị anya anyị na-eme ka ùgwù onwe onye anyị ka mma kamakwa ahụike anyị, usoro ihe eji alụso ọrịa ọgụ ma ya mere anyị na-eme ka ahụ anyị dịkwuo mma n'oge dị mkpirikpi na ogologo oge. Ọ bụ ọhụụ zuru ụwa ọnụ banyere ahụike dị anya na echiche ejiji ejiji na-elekwasị anya naanị na ọnụ ọgụgụ.
Na-eme egwuregwu na-adịghị amasị gị
Nke a bụ mmejọ, n'ihi na n'ikpeazụ ị ga-akwụsị ịkwụsị egwuregwu. Onye ọ bụla nwere ike ịchọta ihe omume dabara na nke ha ụzọ ndụ na ihe ndị masịrị gị. Nke a dị mkpa maka ya iji oge gafee. Ọ bụ ya mere na ị gaghị agbanwe naanị ọrụ gị ma nwalee mmadụ ole na-adọta uche gị, kama ị ga-achọ ndị masịrị gị ka ha bụrụ akụkụ nke ndụ gị.
Kwe ka onwe gị chee mgbanwe ahụ
Mgbanwe anaghị eme site n’otu ụbọchị rue ụbọchị ọzọ ma ọ bụ ya mere na mgbe ụfọdụ, ọ na-esiri anyị ike imezu ha. Ọ dị mkpa Gee anụ ahụ anyị ntị mgbe anyị mere mgbanwe na ndụ anyị, n'ihi na ọ ga-agwa anyị na anyị na-eme nke ọma. Nke a anaghị eme n'otu ntabi anya, mana ọdịmma anụ ahụ na nke uche na-abịa na ndụ dị mma yana ọ bụ ya mere anyị ga-eji ghọta ya mgbe anyị nwere mmetụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Obere nkọwa ndị na - egbochi gị inwe ndụ ahụike
Mkpa ọ dị inwe mmetụta mmetụta uche n'ahụ di na nwunye